काठमाडौंको ‘के’टो’ ता’लमाराङको ‘हि’रो’ – eSidhakura
मुख्य पृष्ठविचार साहित्य/लेखकाठमाडौंको ‘के’टो’ ता’लमाराङको ‘हि’रो’
काठमाडौंको ‘के’टो’ ता’लमाराङको ‘हि’रो’
काठमान्डौ , उनी सु’पर स्टा’र हैनन् । न त कुनै घ’टनाको भि’क्टिम । राजनीतिसँग तीन पु’स्ते सा’इनो छैन । न त कुनै ‘क’र्पोरेट आ’इकन ।’ पावर पनि छैन, पैसाको मा’मलामा त्यस्तै । न त उनीसँग स’फलताको क’था छ, न त कुनै द र्द’नाक व्य’था ।उनका बारेमा लेख्न मनले वि’चार गरिरहँदा दिमागले यस्तै भन्यो । के लेख्ने, कुनै एं’गल भे’टिएन । उनलाई कथाको पा’त्र ब’नाउन दि’माग त’यार हुँदै भएन । दि’मागले अ’डान दो’हो¥यायो– ‘सा’मान्य मान्छेको क’था किन लेख्ने?’मन फेरि के क’म ? जवाफ फ’र्कायो, ‘उनी कसरी सा’मान्य ?’मनले उनलाई ‘अ’सामान्य’ ठान्नु’का केही का’रणहरु थिए।
भ’विश्य ब’नाउनका लागि मानिसहरु गाउँबाट शहर र शहरबाट विदेश छि’र्छन् । तर, उनी काठमाडौंमा जन्मे हु’र्केर गाउँ छिरे । साथीहरु पैसा क’माउनतिर लाग्दै गर्दा उनी स’माजसेवी शिक्षक बने । साथीहरु हिँडेको भन्दा वि’ल्कुल उल्टो बाटो हिँडे । न त दाम क’माउन सके न त नाम । साथीहरुको नजरमा उनी ‘फ’किर’ हुन् । उ’द्देश्यविहीन मान्छेको उ’पमा पाएका छन् । ‘बिना काम य’ता–उता भौं’तारिरहन्छ’ भन्दै साथीहरु बि’ल्ला गर्छन् ।तर, सबैजनाको उद्दे’श्य दाम र नाममा मात्रै कहाँ सी’मित हुन्छ र ? अरुको न’जरमा ‘झ्या’स’ भए पनि उनी सिन्धुपाल्चोक ता’लमाराङको बच्चाहरुको न’जरमा खा’स छन् ।
बच्चाहरुलाई स’पना देखाएका छन् । अ’वसरहरु दिएका छन् । नयाँ–नयाँ वि’षयवस्तुमा ‘अ’पडेट’ गराएका छन् । उनी ती बच्चाहरुका ‘आ’इडल’ हुन् । जुन उनका लागि नाम र दा’मभन्दा माथि छ ।यो कथा एउटा समाजसेवी शिक्षकको हो । शिक्षक हुनुभन्दा अघि उनी पत्रकार थिए । पत्रकार हुनुभन्दा अघि कवि । अहिले कुनै मिडियामा आ’वद्ध नभएका उनी आफूलाई ‘इ’न्डिपेन्डन्ट ज’र्नालिस्ट’ भन्न रु’चाउँछन् । गाउँका ओ’झेलमा परेका कथा व्या’था युट्यु’ब मार्फत सार्वजानिक गर्छन् ।हो यो कथा उनकै हो । उनी अर्थात मो’इन उ’द्धिनको ।
मो’इन भर्खरै २९ वर्षको भए । उनलाई बा–आमाको स’पना पूरा गर्नु छ । आफ्नो भ’विश्य बनाउनु छ । यहीबेला ‘पैसा किन न’कमाएको’ भनेर क’न्पारो त’ताउनेहरुसँग पनि सं’गत गर्नुपरेको छ । ‘तँ हिँडेको बाटो ठी’क भएन’ भनेर सु’झाव दिनेहरुलाई पनि ‘रे’स्पोन्स’ गर्नुपरेको छ । हुन त उनलाई यस्ता कुराले केही फ’रक पार्दैन । अरुको ब’हकाउमा लागेर आफ्नो बाटो भु’ल्ने आ’दत पनि छैन । तर, ‘फ्र’स्टु’ बनाउने यस्तै कुराले त हो नि !मान्छे भि’डमा ए’क्लो छ ।र एकान्तमा पनि को’लाहलग्रस्त छ उसको मन। नि’राशा र उ’कुस–मुकुस नभएका मान्छे सा’यदै होलान शहरमा ।
म्या’राथनको रे’समाझै ठूलो भा’ग खो’ज्न दौ’डिइरहँदा स–साना खु’शीहरु छु’टिरहेका छन् । दौडको अ’न्तिम बि’न्दु कसैलाई थाहा छैन् । सबैजना अ’न्योलमा देखिन्छन् ।आफ्नो मनको चाह’ना थाहा नपाई सि’द्धिन्छ कतिपय जि’न्दगीहरु यहाँ।मो’इन पनि कुनै समय जि’न्दगीको म्या’राथन म’ज्जाले दौ’डिए । शहरमा भौ’तारिए । तर, भौ’तारिँदा भौ’तारिँदै मनले चाहेको कुरा बु’झे र त अहिले सिन्धुपाल्चोकमा र’माइरहेका छन् ।वैशाखको पहिलो साता सिन्धुपाल्चोकको तालामाराङ केही साथीहरुसँग पुगेको थिएँ म ।ता’लमाङ ते’र्से माध्यमिक स्कु’लमा भेटिएका उनी त्यहाँको भो’लेन्टियर शिक्षक रहेछन् । त्यहाँका बच्चाहरुका आ’इडल । बच्चाहरुकै भा’षामा भन्नुपर्दा सु’पर स्टा’र ।
सबैका प्रिय शिक्षक उनी स्कुलको विद्यार्थीका बारेमा हरेक दिन ‘भ्लग’ बनाउँदा रहेछन् ।बच्चाहरुको पढाइ, प्रतिभा र पारिवारिक अ’वस्थाका बारेमा उनले बनाएको भिडियोले त्यो क्षेत्र’मा त’हल्का म’च्चाएको रहेछ।उनकै भ्ल’गका का’रण स्कुललाई न’मुना स्कुल बनाउँन मेलम्ची गाउँपालिकाले २० लाख बजेट पनि दिएको रहेछ ।यत्ति मात्र कहाँ हो र ? बच्चाहरुका लागि पु’स्तकालय ब’नाउन भ्ल’गकै कारण ‘डो’नेशन’ आएको रहेछ । हामी पुग्दा डो’नेशन आएको पैसाले पुस्त’कालय ब’निसकेको थियो। किताबहरु भ’रिभराउ । मो’इन पु’स्तकालयमा बसेर हामीसँग ग’फिइएका थिए ।
डडेल्धुराको परशुराम नगरपालिकाका युवा व्यबसायबाट समाजसेवा तर्फ
नि’र्मलालाई न्याय कसले र कसरी
कोरोना नेगेटिभ भएकी मलाई त यस्तो व्यवहार, पोजेटिभ हुनेलाई कस्तो होला ? घृणा होइन माया दिऊ !
ओखलढुंगा ‘मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिका अध्यक्ष’लाई सुझाव !
नेपालमा कोरोना फैलिँदैन !